Shiinaha 3mm PVC xumbo saarayaasha guddiga iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gokai
Marka loo eego tiknoolajiyada hadda jirta, waxaan ku siin karnaa alwaaxa xumbo PVC ah 1-30mm. Iyaga dhexdooda, 3mm guddiga xumbada PVC waa qeexitaan aad loo jecel yahay. Macaamiisha ayaa inta badan u isticmaala daabicista iyo sameynta looxyada xayeysiinta. 3mm wuxuu u qaybsan yahay guddiga bilaashka ah ee PVC iyo guddiga celuka ee PVC. Dusha sare ee guddiga bilaashka ah ayaa qallafsan, taas oo ku habboon in la nuugo khad daabacan. Dusha sare ee guddiga celuka waa mid siman oo waxaa loo isticmaalaa xardho.
Ii sheeg wax ku saabsan isticmaalkaaga waxaanan kugula talin doonaa alaabta kuugu habboon adiga.
Tilmaamaha Guddiga Xumbo ee PVC
1) baal iftiin, nuugid la'aan, dab damis iyo is-bakhtiiye
2) Caddaynta cimilada, caddaynta waxyeellada, waana la qaabeyn karaa, la qaabeyn karaa, la rinjiyeyn karaa oo shaashadda la daabici karaa, Waxay ku habboon tahay jarista, miinshaaridda, alxamida, dhejinta, sameynta kuleylka, ciddiyaha, qorsheynta, duubista sameynta.
3) Wax-sun ah, aan sun lahayn iyo kiimikada u adkaysta
4) Adag, adag oo leh saameyn saameyn sare leh
5) Warping aan cadeyn iyo wasakh cadeyn ah
6) Si fudud loo nadiifiyo loona dayactiro
PVC Codsiyada Guddiga Xumbo
1) .xafiska carwada, shelf ee supermarket
2) .Guddiga xayeysiiska iyo guddiga saxeexa
3). Xaashida xayeysiinta ee daabacaadda, xardho, goynta, goynta
Waa laguu soo diri karaa adiga wakhti kasta
Sida shirkaddeenu qaanuun u tahay, iibsadeyaasha cusub waa inay bixiyaan khidmadda muunadda iyo xamuulka.Laakiin gaar ahaan, waxaan lahaan doonnaa qaabkeeda ku habboon.Macaamiisha caadiga ah, waxaan ku soo bandhigi doonaa muunad bilaash ah, laakiin waa inay bixiyaan kharashka xamuulka
Sooc loogu talagalay 3mm guddiga xumbo PVC
Cadaan, madow, casaan, buluug, jaalle, cagaar iwm
Kuweena dhumuc kale guddiga xumbo PCV / size sheet
Wareeg: 1250mm-2050mm, 2050mm ugu badnaan.
Length: Dherer kasta.
cabirka caadiga ah: 1220 * 2440mm, 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm
FIIRO GAAR AH: waxaan sameyn karnaa cabir kale sida ku xusan baahida macaamiisha
lacag bixinta L / C, T / T, Western Union, Alibaba pay, Paypal
MOQ 1mm: 300pcs 2-6mm: 200pcs 7mm kor: 100pcs
Gaarsiinta 15 maalmood kadib xaqiijinta amarkaaga
bac balaastig ah ama kartoon la dhoofiyay, dhowr xaashi halkii sagxad ama sida macaamiisha looga baahan yahay. Sidoo kale waxaan ku dhinac mari karnaa filimka PE.
Hore: UV daabac 2mm
Xiga: 4mm sheet PVC caag ah